Kitra an-tora-pasika :: Mety hihemotra ny CAN 2020 amin'ny "beach soccer" • AoRaha
Kitra an-tora-pasika Mety hihemotra ny CAN 2020 amin’ny « beach soccer »
Lasibatry ny valanaretina koa ny baolina kitra lalaovina amin’ny tora-pasika na ny beach soccer. Ankamantatra ny fanatontosana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika na ny Can 2020, hatreto. Mety hihemotra amin’ny taona 2021 ny fifaninanana, raha ny tombantombana.
Tokony ho natao tamin’ny volana avrily lasa teo ny lalao savaranonando ho an’ireo faritra isanisany, saingy tsy nisy raikitra noho ny fisian’ny Covid-19. Milaza ny hanao ny ezaka hanatanterahana ny fifaninanana eo anelanelan’ny volana septambra sy oktobra ny vaomiera Afrikana misahana ny taranja beach soccer. I Ogandà no hampiantrano ny dingana famaranana amin’ity Can 2020 ity.
Ipetrahan’ny olana ny fahateren’ny fotoana satria nokasaina hatao amin’ny faran’ny taona ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, hampiantranoin’i Rosia. Noho ireo antony ireo, dia mety tsy ho tontosa amin’ity taona ity ireo fifaninanana roa ireo, ka hihemotra amin’ny taona 2021. Miankina amin’ny fanapahan-kevitry ny Kaonfederasiona afrikana sy ny Federasiona iraisam-pirenena ny fandaharam-potoana rehetra.
Efa nisalotra ny anaram-boninahitra teo amin’ity taranja ity ny Barean’i Madagasikara, tamin’ny taona 2015 tany Seychelles, ka nahatonga antsika hiatrika ny fiadiana ny amboara eran-tany. Taorian’io dia tsy nety tafakatra lampihazo intsony ny ekipam-pirenena malagasy.
Fampindramam-bola sy krizy Orinasa an-jatony misitraka ny tetikasa Miarina
Finoana :: Hadika amin’ny fitenimparitra ny Baiboly malagasy